China Flange mpanamboatra sy mpamatsy | Kingmetal
Flanges - Fampahalalana ankapobeny
Ity flange ity dia mihodina ao anaty rafitra eo am-bozony izay midika fa ny tsy fivadihan'ny faritra vita amin'ny vody dia azo zahana amin'ny radiolojia mora foana. Ny tsiranoka amin'ny fantsona sy ny flange dia mifanitsy, izay mampihena ny fikorontanana sy ny fikajiana ao anaty fantsona. Ny vozon'ny lasitra dia ankamamiana amin'ny fampiharana kritika
Ity flange ity dia apetaka amin'ny fantsona ary avy eo atsofoka fillet. Ny flanges slip-on dia mora ampiasaina amin'ny fampiharana noforonina.
Ity flange ity dia ampiasaina hanalana ny fantsom-panafody, valves ary paompy, azo ampiasaina ho fonony fanaraha-maso ihany koa izy io. Indraindray dia antsoina hoe flange flank.
Ity flange ity dia counter mankaleo hanaiky ny fantsom-pifandraisana alohan'ny hofehezina amin'ny fillet.
Ity flange ity dia antsoina hoe kofehy na visy. Izy io dia ampiasaina hampifandraisana singa hafa misy kofehy amin'ny fampiharana ambany tsindry, tsy fanakianana. Tsy mila welding.
Ireo flanges ireo dia ampiasaina amin'ny tendrony amam-baravarankely izay ampidirina amin'ny fantsom-boaloboka ao aoriany. Midika izany fa ny tendrony dia manao ny tarehy foana. Ny felam-bondrona dia ankasitrahana amin'ny fampiharana ambany tsindry satria mora mivory sy mifanaraka. Mba hampihenana ny vidin'ireto flanges ireto dia azo omena tsy misy hub sy / na amin'ny vy karbonina voatsabo sy voadidy.
Ity dia fomba iray hiantohana ny fifandraisana misy ny flange proof amin'ny tsindry mafy. Ny peratra vy dia ampidirina anaty fantsom-pandrefesana hexagonal eo amin'ny tavan'ny flange mba hanaovana ny tombo-kase. Ity fomba fampiraisana ity dia azo ampiasaina amin'ny Weld Neck, Slip-on ary Blind Flanges.
Flange WeldingNeck, Slipon, ny jamba, Plate, ThreadedFlange, SocketWeldFlange
Material ANSI CSA105 / A105NA350LF2ss304 / 304L, 316 / 316L
Size ANSI 1/2 * -120 "
Coating anti-rustoil, varnish, yellowpaint, blackpaint, galvanizingetc
etona, rivotra, gasandoil
Package Plywoodcases / pallets
Previous: Caps vita amin'ny vy vita amin'ny karbaona avo lenta
Manaraka: Mafana milentika vita amin'ny savoka vita amin'ny vy azo volena vita amin'ny savony vita amin'ny vy